Fandaharanasa ASA : tohanana ny lalam-piahariana ronono | NewsMada
Fandaharanasa ASA : tohanana ny lalam-piahariana ronono
Par Taratra sur 14/06/2016
Anisan’ny tetikasa iray mahazo fanohanana avy amin’ny fandaharanasa Asa (Agro-sylviculture manodidina an’Antananarivo) ny fiompiana ombivavy beronono. 1,2 tapitrisa euros avy amin’ny Vondrona eoropeanina ny famatsiam-bola ho an’izany. Tetikasa manatsara ny fidiram-bolan’ny mpiompy amin’ity lalam-pihariana ity.
Tanjona amin’izao fanohanana ny lalam-piahariana ombivavy beronono izao ny fampitomboana ny isan’ny mpiompy hifantoka amin’io, fanohanana ny fampitomboana ny vokatra sy fanatsarana ny kalitao. Fitadiavana lalam-barotra vaovao sy maharitra izay vokatra rehetra azo avy amin’ny ronono. Misy 1.400 ireo mpiompy ireo ao anatin’ity tetikasa ity. Ronono 2.000 litatra isan’andro sy izay vokatra hafa, toy ny fromazy, no amidy amin’ireo toerana voafantina fanangonam-bokatra any amin’ny kaominina Ambatomanga, Manjakandriana, Mahitsy, Ambatolampy, raha manodidina an’Antananarivo.
Hita anefa fa mbola maivana loatra ity lalam-pihariana ity. Antony lehibe indrindra ny tsy fahampiam-bokatra sy ny kalitao tsy azo antoka. Tsy maharaka ny tinady eo amin’ny tsena ny ronono eto amintsika. Amin’ireo vokara rehetra ireo, tsy misy afa-tsy 6,5 % ihany ny mankany amin’ireo mpanodina azy. Mamokatra izany be indrindra, 70 %, ny ombivavy vahiny. Lafo vidy anefa ny ombivavy vahiny iray, tsy takatry ny maro.
Ho fampiroboroboana ny « vita malagasy »
Mahatonga ny orinasa Socolait manafatra vovo-dronono 360 t isan-taona izay tsy fahampiam-bokatra avy eto an-toerana izay. Ho fampiroboroboana ny « vita malagasy » izany lalam-piahariana ronono izany, mahatonga ity orinasa ity manofana mpiompy miisa 1.400 hahazoan’izy ireo ronono bebe kokoa, ho 12-15 l isaky ny omby isan’andro. Ny zava-misy aloha izao amin’ny ankapobeny, 4 na 5 l eo monja.
Fahalafosan’ny fitaovana hoenti-miasa, olana iray raha ireo mpiompy ihany ny manodina ny vokatra ao aminy. Sarotra ny hahazoana yaourt tsara kalitao raha tsy manana fitaovana manara-penitra. Ilaina ny fanamoràna fahazoana fitaovana maro ho an’ny mpiompy. Tafiditra ao anatin’ny fepetra takin’ny mpamatsy vola ny fandaharanasa Asa ny fanaraha-maso maharitra ny kalitaon’ny ronono. Tsy mety, ohatra, ny fitahirizana ronono ao anatin’ny “bidon plastika manga” izay mbola be mpampiasa.